सामूहिक प्रयासका कारण हाम्रो टिमको जित सुनिश्चित छ «
युुवा उद्यमी अञ्जन श्रेष्ठ लक्ष्मी समूहका कार्यकारी निर्देशक हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा विगत १५ वर्षदेखि सक्रिय श्रेष्ठ सुरुमा राजस्व समिति सदस्यका रूपमा महासंघ प्रवेश गरेका थिए । त्यसपछि विभिन्न समितिमा रहेर काम गर्दै आएका श्रेष्ठ हाल उद्योग समितिका सभापति हुन् । नेपालमा चकलेट, डेरी, प्लास्टिक, अटोमोबाइल तथा स्टिललगायतका व्यावसायिक क्षेत्रमा सक्रिय रहेका श्रेष्ठ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न निर्वाचनमा वस्तुुगततर्फका उपाध्यक्षका उम्मेदवार हुन् । उनै श्रेष्ठसँग कारोबारकर्मी दीपेन्द्र थापाले गरेको कुराकानीको सार :
महासंघमा वस्तुगततर्फबाट उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ । जित सुनिश्चित गर्ने आधारहरू केके हुन् ?
महासंघ आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्छ ? यहाँको समूहका एजेन्डा केके हुन् ?
महासंघ सामूहिक निर्णयबाट चल्ने संस्था हो । हाम्रो समूहले बोकेको नाराभन्दा फरक समस्यासँग जुध्न नपर्ने भन्नेचाहिँ हुँदैन । अहिले हामीले सामना गरिरहेको कोभिड जस्तो महामारी कल्पना गरेका थियौं र ? यसले मानव जीवनदेखि अर्थतन्त्रको जरा नै हल्लाएको छ । समय–समयमा आउने यस्ता महाविपत्तिसँग जुध्न नयाँ तयारी सुरु गर्नुुपर्ने अवस्था आएको छ । यस्ता किसिमका समस्यासँग जुध्न हामी तयार रहनुपर्छ । त्यसका लागि हाम्रो टिमले प्रस्ट खाकासहित काम गर्नेछ ।
अर्को विषय अध्यक्षमा शेखर गोल्छाज्यू आउनुहुनेछ । उहाँले महासंघमा तीन वर्ष गर्ने कामको प्रस्ट प्लान तयार गर्नुभएको छ । मुख्यतः अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा बढाउन, नेपालमा भएका सम्भावनालाई अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताकहाँ पु-याउन, नेपाली व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउन उहाँको प्लानअनुसार हाम्रो टिम लाग्नेछ । त्यसमा सबै सरोकारवालाहरू (सरकार, समाज, निजी क्षेत्र, कर्मचारी संयन्त्र) सँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने योजना बुनेका छौं । मंसिर १४ गतेपछि त्यसको सम्पूर्ण खाका सार्वजनिक गर्ने शेखर गोल्छाले बताइसक्नुभएको छ । उहाँको योजनालाई पूरा गर्न सबै वस्तुगतका साथीहरूको आवाज लिएर हाम्रो टिम खट्नेछ ।
अहिले पनि हामी ५७ वर्ष पुराना ऐन–नियममा रहेर काम गरिरहेका छौं । यस दौरानमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन भए । तीनवटा संविधान बने तर व्यवसायसँग जोडिएर आउने ऐन–नियम २०१९÷२० सालकै छन् । व्यवसाय गरेर नाफा कनाउनु अपराध मान्ने अवस्था अहिले पनि छ । यसलाई चिर्न हामीले धेरै काम गर्नुपर्नेछ । सरकारले भनेको कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, जलस्रोतजस्ता क्षेत्रमा ढुक्कसँग लगानी गर्न अझै धेरै अप्ठ्यारा छन् । यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्नेछ ।
महासंघभित्रको राजनीति कम गर्दै, उत्पादनमूलक उद्योगको वृद्धि हुन नसकेको समयमा यसलाई सम्बोधन गर्दै कसरी काम गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?
राजनीति केलाई भन्ने ? व्यावसायिक हितका लागि लड्ने संस्थालाई सत्ता राजनीतिसँग जोड्नु भएन । हाम्रो एउटै मुद्दा छ, त्यो हो– नेपालमा औद्योगिक विस्तार गर्ने । त्यसका लागि बाटो खोल्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ । मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले हातले बनाउने मिठाइँबाट चकलेट उद्योगका रूपमा विकास गरेका छौं । जस्तैसुकै परिस्थितिमा पनि व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट हामी अगाडि बढेका छौं । अहिले स्टिल उद्योग चलाएका छौं । नेपालमा गाडी ल्याएर बिक्री गर्ने कम्पनी चलाएका छौं । त्यसको सर्भिसका लागि चाहिने पूर्वाधारमा लगानी गरेका छौं । अहिले गाडी बिक्री गर्न २ सय जना कर्मचारी परिचालन गरेका छौं भने ६ सय जना सर्भिसमा कार्यरत छन् ।